Malunga nathi-I-Haiyan Isiphelo sendlela iibhloko Co, Ltd.
Amandla ombane e-metering junction box yechungechunge Uchungechunge loQhagamshelo lwe-Insulin
Ungcelele lwetekhnoloji yesitalato samabhokisi emitha yombane Inkqubo yebhasi yevolthi ephantsi
Ibloko enkulu yangoku yeSiphelo Strip fuse isolating switch series.
Uchungechunge olukhethekileyo lwe-terminal yolawulo lwe-elektroniki iseti epheleleyo Square fuse isolating switch series.
Multipurpose terminal uthotho Utshintsho lwe-adaptha ye-busbar,
Tshintshela uthotho lwesiphelo Electric meter connector series.
Uthotho lwesiphelo Uluhlu lwebhokisi yejikeji engavisi manzi
Isinxibelelanisi esitsha samandla kunye nezixhobo ezahlukeneyo zentambo kunye nolunye uthotho lweemveliso
Abathengi bethu ikakhulu bangabathengisi, abathengisi bezinto ezizodwa, abenzi bezinto kunye nabakhi benkonzo jikelele ekhaya nakumazwe aphesheya.
Inethiwekhi yethu yokuthengisa
- Phakathi empuma
-Kumazantsi mpuma Asia
- Amantla Emelika
- Ilatin America